Mivarotra Aminay ny Tady Review – Stalin any Londres | tantara foronina - World Book
Tamin’ny Mey 1907, noho ny hafanam-pon’ireo tabilao britanika, dia nivory tao amin’ny Eglizin’ny Mpirahalahy any Hackney, any atsinanan’i Londres, ny Kaongresy Fahadimin’ny Antokon’ny Asa Demokratika Sosialy Rosiana. Anisan'ireo solontena i Lenin, Trotsky, Litvinov, Rosa Luxembourg, ilay mpanoratra Maxim Gorky, mpitsikilo polisy miafina Rosiana roa farafahakeliny, ary ny zanaky ny mpanao kiraro Zeorziana iray izay niantso ny tenany ho Koba Revolisiona, 29 taona. Ny Koba voalohany dia mahery fo Zeorziana Robin Hood-esque, jiolahy niaro ny malemy tamin'ny mahery. Ny tantara dia hahatsiaro ny anarany amin'ny solon'anarana taty aoriana, ny teny rosiana ho an'ny vy: Stalin.
Nandany telo herinandro teo ho eo tany Londres i Stalin, nijanona voalohany sy vetivety tao amin'ny Tower House, trano iray malaza maizina ao Stepney, ary avy eo, noho ny fiziriziny, tao amin'ny trano fonenana manokana tsy dia maloto loatra teo akaiky teo. Ao amin'ny Sell Us the Rope, Stephen May dia manenona hetsika tena izy miaraka amin'ny eritreritra foronina mba hamoronana tantara iray izay manohitra ny fanasokajiana mora: sombin-tantara mahasarika izay tantara an-tsary manjavozavo amin'ny fiokoana ara-politika sy sarin'ilay mpanao didy jadona ihany koa. nitarika ny Fampihorohoroana Lehibe tamin'ny taona 1930, ny fampielezan-kevitry ny famoretana ara-politika mandatsa-dra sy feno herisetra indrindra teo amin'ny tantara Rosiana.
Olona manao ahoana no lasa biby goavam-be? Nanomboka tamin'ny fotoana nahatongavany teo amin'ny seranan-tsambon'i Harwich orana, ny May's Koba dia tsy manaiky lembenana, tsy matoky ny hatsaran-tarehy, lehilahy fohy miaraka amin'ny fehikibo fohy ary ny toetran'ny herisetra azo avy amin'ny kapoka feno habibiana fony mbola zaza. Tsy tiany ny namany, izay heveriny ho manambany sy manana tombontsoa tafahoatra. Mankahala kokoa an'i Angletera izy, fa tsy noho ny loto, ny zavona ary ny sakafo ratsy. Any Angleterre, miaraka amin'ny teny anglisy mahazatra azy, dia toy ny tany Rosia hatrizay izy: vahiny. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny kaongresy, nisy ny fihetsiketsehana natao hanilihana ny delegasiona Zeorziana tsy handray anjara amin'ny adihevitra. Ny fanelanelanana nataon'i Lenin dia mamela azy ireo hamoy ny zo hifidy, saingy mazava ny hafatra: tsy mitovy daholo ny Kominista.
Manasongadina ny fifanoheran'ny foto-pisainana kominista mihitsy i May: ny habibiana marina amin'ny finoany sy ny herisetra mahatsiravina ataon'ny fomba fiasany.
Takatr'i Koba an'i May izany. Takany koa fa mety ho fitaovam-piadiana mahasoa ny fahanginana. Mpihaino i Koba, lehilahy mahatsikaritra ny zava-drehetra: “Tsy nanoratra tononkalo nandritra ny taona maro izy, saingy miezaka ny hitazona ny mason'ny poeta. Ny mason'ny mpampijaly koa angamba. Manam-pahaizana amin'ny famantarana ny fahalemena, i Koba dia lehiben'ny lalao chess tsy misy indrafo amin'ny politika revolisionera. Fa raha tsy manana ahiahy izy, dia tsy biby goavam-be, tsy mbola, tsy mbola. Mbola misy malefaka ao anatin'ny akorany mafy. Niaro an'i Arthur Bacon tanora izy, tovolahy iray any Londres ary mpikomy amin'ny fanofanana, izay, toa an'i Koba tamin'ny taonany, dia nodarohan'ny rainy mpisotro toaka. Manoro hevitra be loatra izy. Mankasitraka azy, ary miha-mahazo vahana an'i Elli Vuokko, tanora finlandy tsy matahotra izay tsy manao na inona na inona hanapotika ny hambony. Pragmatic amin'ny raharaham-barotra ra, na izany aza, matoatoa va no mampanahy azy. "Ny velona dia tonga ary mandeha, fa ny maty tsy mandao anao," hoy izy tamin'i Elli. "Ny olona rehetra vonoinao dia any ivelany, manindrona ny tanany, maniry ny ho fantatra, tsy mety hohadinoina." Efa mahatsapa azy ireo isika, ireo matoatoa an-tapitrisany ho avy, mihetsiketsika eny amin'ny sisiny.
Ao amin'ny epilogue iray, i May dia manaiky fa misy ampahany amin'ny tantarany novolavolaina. Tsy miala tsiny izy. "Fiction," hoy izy, nanonona an'i Laurent Binet, "tsy manaja na inona na inona." Toy izany koa no azo lazaina momba an'i Elli manintona (sy foronina). Clairvoyant, tsy misy tahotra, ary haingana tsy hay tohaina ny mihomehy, farafaharatsiny dia faly amin'ny fisakaizana vaovao amin'i Rosa Luxemburg tahaka ny momba ny mety hisian'ny fifankatiavana amin'i Koba. Amin'ny fampifandraisana ny tantaran'izy ireo, i May dia manasongadina ny fifanoheran'ny foto-pisainana kominista mihitsy: ny habibiana marina amin'ny finoany sy ny herisetra mahatsiravina ataon'ny fomba fiasany. Ny idealista Elli dia mafy orina toa an'i Koba amin'ny fahatokisany fa "ny firenena afaka dia tsy afaka mivoatra afa-tsy amin'ny reniranon-dra."
Misoratra anarana amin'ny gazetinay Inside Sabotsy mba hijery manokana ao ambadiky ny sehatra momba ny fanamboarana ireo tantara lehibe indrindra amin'ny gazety, miampy lisitra voafantina amin'ireo zava-nisongadinay isan-kerinandro.
Toa manahirana kokoa ny famoronana ara-tantara hafa. Ao amin'ny tantaran'i May, namono ny rainy mpampijaly azy i Koba: tsy afaka manozongozona ny fanahiny izy, na amin'ny ora fifohazany na amin'ny nofiny. Na dia manome resonance Shakespearean tsy misy diso aza ity tantara ity, ny marina somary mampihomehy kokoa dia ny fahafatesan'ny rain'i Stalin noho ny cirrhose roa taona taorian'ny Kongresin'i Londres. Amin'ny alàlan'ny fakany ny Koba amin'ny tantara foronina fototra toy izany, dia mampisalasala ny amin'ny fahamarinan'ny zavaboariny i May.
Mifanohitra amin'ny ruminations, mbola tantara mahafa-po lalina ity. Mampihetsi-po, mamorona, mahatsikaiky matetika, Mivarotra aminay ny tady dia mahavita zavatra tsy fahita firy sy mampahery: Mitaky tantara ara-politika mahery vaika sy fisaintsainana marim-pototra momba ny toetran'ny faharatsiana, ary mampifangaro izany amin'ny tetika haingana mba hamoronana tantara iray. toy ny propellant toy ny stimulant. Ny fiction dia mety tsy manaja na inona na inona, fa ny tantara iray tena mahay toa izany dia mitaky zavatra betsaka.
Amidio anay ny tady nataon'i Stephen May navoakan'ny Sandstone (£8.99). Mba hanohanana ny libromundo sy The Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.
Sokajy Vaovao farany Tags Fiction, Londres, FAMERENANA, tady, mivarotra, Stalin, Stephen Ticket navigation
Free Thought Review nataon'i Susie Alegre – Ny Loza ara-teknolojia lehibe amin'ny eritreritra malalaka | boky fiaraha-monina
Ny ora tsy azo antoka